ARCORA G1 / 2 kichin ọkpọ kpụ ọkụ n'ọnụ kpụọ nickel - arcorobinet
Welcome / ngwa / Foset ngwa / ARCORA G1 / 2 Kitchen Foset Sprayer Isi Nchacha Nickel
Kitchen foset spray over overview: Ncha nchara nickel technology sprayer nwere PVD leghaara nickel imecha na nickel mkpuchi omimi nke 10,0 µm, nke nwere ike ịbụ 5,0 µm n'ozuzu, nke na-achọ obere nhicha ma na-enwu gbaa site na iguzogide ntụpọ mmiri, mkpịsị aka na-ada.
Rịba ama tupu ịzụta: a isi 2660003 ịgba bụ naanị maka G1 / 2 (MALE) njikọ (banyere 2cm ma ọ bụ 0,8inch), ọ bụghị npt, ọ bụghị eluigwe na ala Akwa mma: Kichin foset ịgba isi bụ Wuru nke engineering ọkwa plastic (abs) nakwa dị ka kpọkọtara neoperl aerator, ike ga-eji ruo oge ụfọdụ kwa ụbọchị ojiji, leghaara nickel imecha bụ rustproof enweghị mkpịsị aka.
Operatingzọ ọrụ abụọ: mmiri na-aga n'ihu na-enye mmiri dị mma ma dị mma, na-enweghị nkwụsịtụ; Spgba mmiri nwere ike ịsacha mkpụrụ osisi ma ọ bụ inine na nwayọ, ihe ntanye na-enweghị mmerụ dị mfe ịsacha: A na-eji mkpịsị aka gị kpochaa ngwa ngwa ABS n'ụzọ dị mfe, enweghịkwa isi ike na mmiri , na-eme ka mmiri na ndụ dịrị mgbe niile
Akwụkwọ ikike, ọrụ ndị ahịa: akwụkwọ ikike afọ abụọ na ọrụ ndị ahịa. Ejiri 2 ụbọchị laghachi n'efu.
ARCORA Azụmahịa Na-enweghị Aka Nkesa
ARCORA emetụ ncha dispenser Ka ...
ARCORA Kitchen igwekota Pịa na Chrome raygba
ARCORA Kitchen igwekota Kpatụ na ịsa ahụ ...